Dorashooyinka Somaliland Wa 2022 Qore Khadar Ibrahim
Sunday September 20, 2020 - 09:00:13 in Articles by Hadhwanaag News
Baryahan waxa ka socda gobolada somaliland kacdoon diidma ah kuna saabsan qabashada doorashooyinka iyo saamiga lagu galiyo, arinta kow waxa ka seexda cabdiraxmaan cirro marku ahaa gudoomiyaha barlamaanka 12 sanadood. waxayna dadka ku maaweliyen heshiis in doorashadda 2020 la qabanayo, horta caqligi mee iyo sharcigi labaduba mawaafaqsana heshiiskii ay xisbiyadu mar galin.....
Waxaana u haboon madaxweyne muuse biixi in u heshiiskaa ka baxo oo tira koob dalkan galo bilawga 2021 si gobol walba saamigiisu halkaas uga soo baxo...kadibna sida u xeerarku dhigayaan ururo la furo si tartanka doorashooyinka loo galo 2022 taasna sharciga waafaqsan tahay.
Heshiiska waxa ku baryootay faysal iyo cirro si ay wajigooda iyo mawqifkuda u badbaadiyo muuse!. Lkn heshiska waxa ka hor yimi diidmada golayaasha barlamaanka iyo gudoomiyaha gurtida saleebaan oo aan marnaba ansixin doonin heshiiska ,dhowr xildhibaana afkooda ka sheegay marar la weediyey.
imika waxay rabaan labadaas xisbi in ay ka shubtaan musharaxiinta lacagtii musharax nimadoodi 5 kun dollar cala musharax! ,waxaana u soo jeedinaya musharaxiinta suga wakhtiga dhabta ah 2022 ee ururada la furayo yaa laydinka cunin waxaad u soo tacabtayn !!!!.